Mi Mix2ကိုပြန်အဆင့်မြှင့်ထားမယ့် Xiaomi Mi Mix 2s – DigitalTimes.com.mm
397 Shares 254 Views
မနှစ်က Xiaomi ကနေ Mi Mix2ဖုန်းတွေကိုထုတ်ခဲ့ပြီး လုံးဝဘောင်မဲ့နီးနီးမော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ မူလ Original Mi Mix ဖုန်းတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲစမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi အနေနဲ့ လာမယ့် MWC ပွဲမှာ Mi Mix2တွေကိုမှ ဆန်းသစ်ထားတဲ့ဗားရှင်းသစ်တွေကို မိတ်ဆက်နိုင်ချေရှိကြောင်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ Mi Mix 2s လို့ခေါ်ပြီး ဟန်းဆက်ရဲ့ specs တွေက တရုတ်နိုင်ငံဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ Weibo မှာပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာတော့ အနားလေးဘက်လုံးကလည်း ceramic body ဖြစ်ပြိး 5.99-inch full-screen display ဖြစ်မှာပါ။
လက်ရှိဖြစ်နိုင်တာကတော့ clock-speed 2.8 GHz ရှိတဲ့ octa-core CPU သုံးထားတဲ့ Snapdragon 845 ကိုသုံးမယ့်ပုံပါ။ Adreno 630 GPU နဲ့ RAM 8GB, မြန်နှုန်းမြင့် UFS storage 256GB ကိုသုံးထားမှာဖြစ်ပြီး ကျောဘက် 12MP ရှိတဲ့ dual-camera တွေက optical zoom ကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ global 4G LTE bands တွေနဲ့ under display fingerprint scanner ကိုသုံးထားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Mi Mix 2s အတွက် ထွက်လာတဲ့ teaser မှာတော့ ဖုန်းရဲ့ပုံစံကိုပြထားပါတယ်။ ထိပ်ဖက်လည်း notch မပါဘဲ လုံးဝအပြည့်ဖြစ်ပြီး ရှေ့ကင်မရာနေရာကိုလည်း screen ရဲ့ညာဘက်ထောင့်မှာ နေရာသေးသေးလေးပဲယူထားပါတယ်။ ဘေးဘက်ဘောင်၎ခုလုံးကတော့ Mi Mix2တုန်းကထက်တောင် ပိုပါးသွားပါတယ်။
ဒီဖုန်းက အမေရိကန်ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်မယ့် Xiaomi ရဲ့ ဟန်းဆက်အသစ်များဖြစ်နိုင်လေမလား?? အတိအကျသိရဖို့ လာမယ့် ၂၆ရက်နေ့ ဘာစီလိုနာမှာကျင်းပတော့မယ့် MWC ပွဲကိုပဲ စောင့်မျှော်လိုက်ကြရအောင်….
မနှဈက Xiaomi ကနေ Mi Mix2ဖုနျးတှကေိုထုတျခဲ့ပွီး လုံးဝဘောငျမဲ့နီးနီးမျောဒယျဖွဈတဲ့ မူလ Original Mi Mix ဖုနျးတှရေဲ့နောကျဆကျတှဲစမတျဖုနျးတှဖွေဈပါတယျ။ Xiaomi အနနေဲ့ လာမယျ့ MWC ပှဲမှာ Mi Mix2တှကေိုမှ ဆနျးသဈထားတဲ့ဗားရှငျးသဈတှကေို မိတျဆကျနိုငျခရြှေိကွောငျး ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ Mi Mix 2s လို့ချေါပွီး ဟနျးဆကျရဲ့ specs တှကေ တရုတျနိုငျငံဝဘျဆိုဒျဖွဈတဲ့ Weibo မှာပျေါခဲ့ပါတယျ။ ဒီဖုနျးမှာတော့ အနားလေးဘကျလုံးကလညျး ceramic body ဖွဈပွိး 5.99-inch full-screen display ဖွဈမှာပါ။
လကျရှိဖွဈနိုငျတာကတော့ clock-speed 2.8 GHz ရှိတဲ့ octa-core CPU သုံးထားတဲ့ Snapdragon 845 ကိုသုံးမယျ့ပုံပါ။ Adreno 630 GPU နဲ့ RAM 8GB, မွနျနှုနျးမွငျ့ UFS storage 256GB ကိုသုံးထားမှာဖွဈပွီး ကြောဘကျ 12MP ရှိတဲ့ dual-camera တှကေ optical zoom ကိုပေးစှမျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ global 4G LTE bands တှနေဲ့ under display fingerprint scanner ကိုသုံးထားမယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
Mi Mix 2s အတှကျ ထှကျလာတဲ့ teaser မှာတော့ ဖုနျးရဲ့ပုံစံကိုပွထားပါတယျ။ ထိပျဖကျလညျး notch မပါဘဲ လုံးဝအပွညျ့ဖွဈပွီး ရှကေ့ငျမရာနရောကိုလညျး screen ရဲ့ညာဘကျထောငျ့မှာ နရောသေးသေးလေးပဲယူထားပါတယျ။ ဘေးဘကျဘောငျ၎ခုလုံးကတော့ Mi Mix2တုနျးကထကျတောငျ ပိုပါးသှားပါတယျ။
ဒီဖုနျးက အမရေိကနျဈေးကှကျကိုထိုးဖောကျမယျ့ Xiaomi ရဲ့ ဟနျးဆကျအသဈမြားဖွဈနိုငျလမေလား?? အတိအကသြိရဖို့ လာမယျ့ ၂၆ရကျနေ့ ဘာစီလိုနာမှာကငျြးပတော့မယျ့ MWC ပှဲကိုပဲ စောငျ့မြှျောလိုကျကွရအောငျ….